Aucuba waba nomhlobiso izindlu eziningi. amabala Golden amaqabunga ukwenza isitshalo ezikhangayo ikakhulukazi. Lezi izindawo engavamile wamnika igama lesibili - kwesihlahla segolide. Phakathi eziqhakazayo phakathi amahlamvu zemabula zibonakala encane ebomvana izimbali, bese kukhona okufanayo umbala amajikijolo. Kodwa abanye abantu bakhetha aucuba ukunakekelwa ekhaya? Care kule isitshalo undemanding ngempela akudingi mzamo okuningi.
Le mbali okuhle ukuthi kufanelekile ngisho abantu abangafuni ikakhulukazi bathanda ukudlala zonke izinhlobo zezitshalo. It kufanela e cishe kunoma iyiphi elingaphakathi futhi ayidingi ukudalwa izimo ezikhethekile. Of izinhlobo eziningana zalesi sihlahla ithandwa kakhulu aucuba Japanese. Naphezu ukwenqena we-Japanese ukwabelana amagugu azo oluhlaza, kusenzima uyabukeka emehlweni namuhla abantu emazweni amaningi. Ukuxoxa kakhudlwana, okuyinto ukhetha Japanese ukunakekelwa aucuba nasekuvezeni izithombo zaso ezintsha ekhaya.
aucuba Japanese enesizotha kakhulu. Indawo yemvelo kwendawo salo ihlathi nakwezifudumele, okusho ukuthi isetshenziswa ukusinda umthunzi ezijulile. Ngakho lokho ngokuya umbuso ukukhanya ukhetha aucuba ukunakekelwa ekhaya? Ukunakekela isitshalo kuzomele sifake wo hlinzeka yokukhanya okusabalele.
Okungukuthi, abangabantwana isitshalo zingafakwa kuphi ekamelweni, kodwa inikezwe ukufinyelela okungenani ezinye elangeni. Ukuze namanzi kombala kuhle imbali namanje ngangingekho emakhoneni akude iwindi. Kodwa imisebe eqondile kwelanga kungaba yingozi kakhulu ezithinta emthini segolide.
Ubunzima kuphela esibandakanya okuqukethwe aucuba exotic ekhaya - it is ngokulungisa lokushisa. Lesi sitshalo nje awukwazi ukubekezelela okushisa aphezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kuyinto lokushisa yokuthi idlula 20 ° C. emoyeni Too evuthayo Ungenza umuntu asheshe aguge aucuba. Lokhu kuboniswa iqiniso lokuthi uzoqala ukulahlekelwa amaqabunga awo amhlophe amaningi.
Kodwa singalahlekelwa amahlamvu, edinga ukunakekelwa aucuba ekhaya? Ukunakekela, uma zingancishiswa lokushisa ekamelweni cha, kufanele kube ukuhlehlisa ukuze mgwaqo. Uma kuziwa efulethini, ungenza imbali ngoba ehlobo on emphemeni. Uma kungekho kuvulandi, sekuyisikhathi ukuhambisa imbiza ukuze ekhoneni kude futhi mnyama. Kungcono ukuvumela amahlamvu uzolahlekelwa ngombala kuka ngokuphelele osyplyutsya.
Kungakuhle izinga lokushisa lomoya ezungeze simila, kungcono ukushintsha kancane kancane. Aucuba uyazibekezelela imodi ebusika ezishisayo, okuyinto zokhahlamba kusuka 7 kuya ku-15 ° C akuvunyelwe lokushisa ngezansi 5 ° C. Uma lingaphezulu kakhulu kuka-15, kungenzeka ukuthi lesi sitshalo eshiya kabusha.
Kuyacaca ukuthi 15 egumbini for a man - kungcono buyabanda. Okungenani ukuzama ukuhlela kwesihlahla segolide kahle kude heater futhi kulelo gumbi ebanda kunazo endlini. Zonke ezinye akuyona ezingezwakali ngakho aucuba Japanese. Uyabakhathalela ekhaya lakhe bazokwazi ukufeza ngisho ingane.
Ukunisela futhi efaka umquba
Futhi yini okufanele aucuba ukuthola ukunakekelwa ekhaya ngokuya nomswakama? Uyabakhathalela idinga amanani angalingani amanzi unyaka wonke. Winter imbali polevat kudingekile ngezinye izikhathi, ngokuvamile kungcono fafaza amanzi. Uma ngalesi sikhathi aucuba eqinile uthele, leaf embozwe namabala amnyama. Esikhundleni ukuthambisa njalo ngalesi sikhathi kungcono ukuzama moisturize isihlahla ngokuvamile segolide ngokusebenzisa nebulizer. Ebusika, lapho imbali ayisekho ngenkuthalo ezikhulayo, akadingi ukuvundiswa.
Ngesikhathi sasehlobo, aucuba, kunalokho, idinga izakhamzimba. Ukuze ondle isidingo sakhe ukuba abe kanye ngeviki. It kungenziwa alternated nge amaminerali Umanyolo organic ngokuphumelelayo. Ehlobo fafaza isitshalo asikho isidingo esikhethekile, kodwa kudingeka uyophuziswa noma nini inhlabathi eyomile ungqimba phezulu.
Izihlahla kanye ngokuxhunyelelwa
Ukuze ukwakheka umqhele aucuba isiqalo esihle kakhulu entwasahlobo. Ukuze Bush kwadingeka simise enhle nemicikilisho ngokwanele, afeze izihlahla kanye ngokuxhunyelelwa. Sika ezingxenyeni ingasetshenziswa yokuzalanisa. Ngaphezu kwalokho, ngisho nesidingo evamile ye ukufakelwa imbali aucuba Japanese. Uyabakhathalela ekhaya kusho ukukhetha isikhathi esifanele futhi ukuhlinzeka inhlabathi ezifanele.
Nakuba lesi sitshalo usemncane, kufanele utshalwe ibe inhlabathi entsha njalo ngonyaka. Uma sesivele sinalo ukubhekana imbali eside (phezu 5 iminyaka), washintsha emhlabathini wakhe kufanele kube kancane kancane. Kungcono kulokhu ukugxila ohlelweni impande. Lapho ingena phakathi bonke inhlabathi isitsha sezimbali, kubalulekile ukuba ukufakelwa.
Thatha imbewu aucuba kunzima kakhulu, ngenxa nokulungiselela zabo kuyadingeka ukuba izitshalo kokubili iduna nensikazi. Kodwa kukhona indlela elula ukukhiqizwa kabusha yayo. Lokhu kungenziwa nge-cuttings ukusika. Isikhathi esingcono kakhulu sokuba ahlabayo yabo Agasti-September noma March-April. Ukukhetha kwabo kungcono ukuyeka phezu cuttings wokhuni oluqinile kanye amaqabunga ambalwa futhi efihlekile ngomumo ukuvula.
Ukuze cuttings ukumila, kufanele itshalwe esihlabathini noma isihlabathi kanye Peat inhlanganisela. Ngemva kwalokho kudingeka ukwakha abamba ukushisa okuthiwa. Ngenxa yale njongo yentiwe Isiqu embizeni noma esikhwameni plastic. Ungakhohlwa mayelana ayakhala, sishaye nokushaya komoya ahlabayo. Uma konke kuhamba kahle, khona-ke entwasahlobo uzosungula uhlelo ezinhle impande kakade. Cishe ngo-Ephreli imbali kungenziwa itshalwe emhlabathini okulungiselelwe.
Aucuba, ukunakekelwa ekhaya lapho elula ngokwanele, Akudingi indlela ekhethekile ukulungiswa inhlabathi lapho luyokhula. Okuhle Ukuthi ukugcina okunjalo ngezabelo eseduze: 600 g ngebumba-phansi ishidi turfy ukuthatha 200 kanye 200 of Peat nokungeza ingxube cishe 100 g isihlabathi. Kule ngxenye aucuba uyozizwa omkhulu.
Kwelinye icala, ungakwazi mix Peat, amaqabunga kanye humus inhlabathi kanye isihlabathi imali elinganayo, bese ufaka ukuba kabili Turf. Ezansi ebhodweni ibekwe ngempela amanzi njengoba aucuba, ukunakekelwa ekhaya reproduction ayiyona inkimbinkimbi, akathandi umswakama ngokweqile. Enye - kuba ukutshala izitshalo in ikhambi izakhi ngaphandle kwenhlabathi.
Kubalulekile ukuqaphela izingozi ezibangelwa aucuba. Ukunakekelwa ekhaya, ingadi noma ehhovisi simila ngezinye izikhathi kuthiwa abantu ezingozini zempilo. Zonke izingxenye lesi shazi amahle ekuqaleni, imbali ayinangozi anobuthi. Imininingwane yale ubuthi emzimbeni kungabangela ukuvuvukala esiswini namathumbu, uhudo, kuholele ukubukeka igazi umchamo. Kubalulekile kakhulu ukuze bazivikele contact nezingane zabo nezilwane.
Ukuziqhenya aucuba Japanese ungakwazi ukuhlobisa indawo. Le mbali iyinhle kangaka Abaklami ezaziswayo abantu abangathandi anakekele izitshalo. Konke kuyadingeka ukuze isihlahla yegolide aluhlaza futhi amahle, namaqabunga umqhele ukunikeza kuye nge primer efanelekayo, kanye ngonyaka noma ngaphansi ngokuvamile ukuze repot futhi ukuhlakula, zama ukungazivezi adalule kuye lokushisa esibucayi Ungakhohlwa ngezikhathi bazithela futhi wondla.
Euharis: ukunakekelwa ezinhle kakhulu lily Amazon
Honeysuckle Cinderella: incazelo kanye nezici kulinywe
Hydrangea macrophylla: izinhlobo ebusika-eziqinile (ukubuyekeza)
Crataegus laevigata - udokotela linesizotha
Ungasusa kanjani iphasiwedi kusuka efonini? Ukususa nokubuyisela iphasiwedi efonini yakho
Uzbek pilaf iresiphi
Inkosi isobho Tom Yam
Shagreen - uhlobo lesikhumba, emaphepha kanye indlela yokudweba izindonga
Ama-Motor Reducer and Reducers Bonfiglioli.
Don Riklz: Ama-Movie kanye ne-Biography